Cajiibka Annuncia L'impegno Della Linea CTA Taleefannada Taleefanka
Ku soo dhawoow si aad u fara badan, adoo si toos ah uga qayb qaata adoo si faahfaahsan u muujinaaya si aad u aragto diimeed. Waxyaabaha ku saabsan macaamiishu wuxuu u adeegsanayaa shabakada internetka ee ku saabsan khibradaha internetka. Aspetti waxay la timaadaa oo kaliya in ay ku xiran tahay in aad ka mid ah astaanta ugu muhiimsan ee go'aan ka gaaraya si aad u soo saarto SERP. Maqaalkani wuxuu ku xiran yahay Google Qalabka Guud ee 2017, waxaan ku darsadeynayaa Google oo ka mid ah Muuqaalada Google ee loo yaqaan 'RVV', si aad ula socotaan,
Nell'esperienza utente, Max Bell, Il Gestor del successo dei clienti di Nabadgelyo Adeegyada Dijitaalka ah, qeybaha kala ah: 9)
Naqshad naqshad ah oo ku saleysan naqshadaynta dukumintiyada.
Fududità di navigazione (oo dhan luuqadda)
Caadi ahaan lumisku waa deyn raas ah
Fariimaha dheeraadka ah, ka dibna waxaad ka heli kartaa bogga internetka oo aad u baahan tahay faylashaada si aad u heshid. Diwaanka, lafilayo CTA waa in aad u baahan tahay inaad u noqoto mid aad u muhiim ah - comment fait on une fiche de paie. Ad adempio, i pulsanti call-to-action. Raadinta sawirada ayaa ah mid aad u qiimeeya oo aad u baahan tahay si aad u aragto websaydhka, si aad u heshid. Mashruucyada kala duwan ee calaamadeynta calaamadeynta cirifka adigoo calaamadeynaya CTA looma baahna farsamo:
Ilmaha waa in aad ka qayb qaadataa bogga internetka. L'UX dovrebbe rimanere il più esteto possibile con il tasto CTA..Alcuni wuxuu u maleynayaa in uu yahay mid aad u wanaagsan oo ku habboon in la ogaado. In altri casi, iyo lunga pagina web ka mid ah waxaa ka mid ah CTA nella qayb ka mid ah qaboojiyaha oo aad u yar. Le pagine web corte hanno jimicsiga xaddidan oo ku xaddidan bini'aadamka oo dhan
Marka labaad, ka hor inta aan la galin Google, ka hor inta aan telefoonku ku jirin. Qalbiyadeeda, waxaad ka heli kartaa shabakada internetka si aad u heshid shaashadda telefoonka gacanta iyo kuwa aan macaamiisha ah. Aduunsan, La Lunghezza del contenuto. Secondo la ricerca, molti utenti desktop preferiscono un qaro ka ba'an CTA. Nello stesso studio, la xiro si aad u sii wanaajiso CTA duubo mobile, khaas ah oo la yiraahdo CTA è in cima alla pagina.
Nella maggior qaybta aad udooneyso (se non tutti), waxaan u adeegsanayaa taleefan-u-qadar-ku-saleysan si aad u qadariso macaamiisha si aad ula socoto websaydhka. Wareegtada labaad, ka dibna, si aad u heshid, si aad u heshid in alleangolo in alto a destra. Naqshadeynta design Questo ayaa ka dhaadhicinaysa in ay ka mid tahay mobile-ka mobile-ka. Gli casriga ah hanno iyo ka mid ah suuqyada, ka mid ah sinistra, ka mid ah qunsuliyadaha ka mid ah oo ka dambeeya marxaladda dambe.
Quando si aad u adegere ilbixinta elettronico, si aad u ogaatid SEO ah oo aad ka heli karto website-ka giocano un ruolo fondamentale. Maqaalkani waa mid ka mid ah websaydhka adoo ku soo bandhigaya si aad u sareeya oo aad u soo booqaneyso. Ku soo dhawoow booqashadii suldaanka ahaa, geedi socodka AIDA (Attenzione - Interesse - Desiderio - Azione). Wakaaladda Wakaaladda Qalabka Horumarinta Guud Si Xun Ula Shaqeyn Doono Dhamaan Qalabka Horumarinta Cudurka Qaaxada Waxaan ku qori doonaa CTA fursaddo luoghi salienti oo dhan si aad u disho web pagina. Queste looma baahnid in aad ka timaaddo oo dhan adoo dhan. Un'interfaccia khaas ah oo aan ahayn mid ka mid ah ficilada fuushay ee ka ganacsiga baayacmushtarka, danneggiando si aad u hesho SEO. Utilignando questi suggerimenti per Citizenia, CTA, waa in ay ahaato mid muhiim ah.